नामका लागि नै हमाला, को बन्ने हो कमला ? « Mazzako Online
नामका लागि नै हमाला, को बन्ने हो कमला ?
नायिका रेखा थापाले ‘कमला’ शीर्षकमा चलचित्र बनाउने भनेर निकै अघि नै भनेकी थिईन । तर, उनले चलचित्र ‘कमला’लाई पछि सार्दै ‘हिम्मतवाली’ बनाईन । उनको योजना अनुसार भने चलचित्र ‘कमला’, ‘हिम्मतवाली’ पछिको उनको अर्को प्रोजेक्ट थियो । तर यही नाम राखेर चलचित्रको छायांकन शुरु नै भईसकेको छ । चलचित्रलाई रेखाले भने बनाएकी होइनन् ।
चलचित्र ‘कमला’को समिर मियाँले निर्देशन गर्दैछन् भने चलचित्रमा मुख्य भुमिकामा अभिनेता सविन श्रेष्ठ देखिनेछन् । चलचित्र ‘कमला’ हरर शैलीको चलचित्र रहने जानकारी गराईएको छ । ‘कमला’को छायाँकन काठमाडौंमा र चरिकोटमा हुनेछ । एक महिनामा छायांकन सक्ने लक्ष्यको साथमा चलचित्रले फ्लोर ज्वाईन गरेको हो ।
चलचित्र ‘कमला’मा सविन श्रेष्ठको अलावा सलोनी गुरुङ र सुलेमान शंकर ‘इकु’ को पनि मुख्य भुमिका रहनेछ । चलचित्रको मुख्य भुमिकामा देखिन लगेकी सलोनी नै ‘कमला’की मुख्य निर्माता हुन् । चलचित्रमा निर्देशक समिर मियाँ र पूर्ण महर्जनको पनि लगानी रहनेछ ।
चलचित्र ‘कमला’लाई विनोद सापकोटाले खिच्नेछन भने चलचित्रमा ओम सुनुवारको संगीत रहनेछ । सुरेश चौधरीको पटकथा एवंम नृत्य निर्देशन रहने चलचित्र ‘कमला’ कस्तो बन्ने हो त्यो भने प्रर्दशनमा आएपछि मात्रै थाहा होला । तर सुन्नमा आएअनुसार निमात्री रेखा थापा र अहिलेको निर्माण टोली कसैले पनि चलचित्रको नाम भने दर्ता गराएका छैनन ।